Marka ay murugadu dheeraato | Suomen Mielenterveysseura
Kaisa waa 45 jir dumar ah oo reer Helsinki ah, taasoo labadeedii waalidba geeriyoodeen muddo yar gudeheed. Intaas kahor Kaisa waxay u jiratay kansar, kaasoo ay ka bogsatay. Geerida labadeeda waalid iyo jiradeeda waxaa ka soo wareegay muddo sedex sano ah, laakiin Kaisa markii ay soo xusuusato waalidkeed dhawr maalmood ayay ooyneysaa. Xitaa ma aha mid maskaxdeedu marwalba ka maran tahay in cudurkii kansarku suurtogal yahay inuu soo cusboonaado.
Maxaa Kaisa la gudboon?
Kaisa waa qof deggan caasimadda, marka hore waxay ballan ka qabsan kartaa shaqaalaha SOS-xarunta dhibaatooyinka. Xarumaha dhibaatooyinka ee degmooyinka ee Finland oo dhan xitaa waxay leeyihiin inta badan waqti la booqdo. Kaisa haddii ay rabto way wici kartaa telefoonka ka caawinta dhibaatooyinka oo ay kala wadahadli kartaa waxay tabaneeyso. Shaqaalaha dhibaatooyin ka caawinta Kaisa way kala xaajoon kartaa dareenka la xiriira xanuunkii ay qabi jirtay iyo geeridii waalidiinteed oo way kala hadli kartaa, sabata ay awooddeedii ugu soo noqon la’dahay oo murugada iyo ka cabsashada cudurkaas ay ayada ugu dheeraadeen.
Kaisa way la xiriiri kartaa shaqaalaha dhibaatooyin ka caawinta, xitaa haddii aysan ka haysan wax fikir ah, sababta murugada iyo kurbada ay uga bixi la’dahay. Markaad wadahadleysaan shaqaalaha dhibaatooyin ka caawinta xaaladdu waa mid qeexan oo Kaisa waxaa laga yaabaa iney maskaxdeeda ku soo dhacaan arrimo, kuwaasoo ay ka nafiseyso markey ka hadasho oo ay fudeeyd dareento.
Geerida waalidiinta iyo u jirashada cudurada khatarta ah waa dhibaatooyin, kuwaasoo kasoo kabsashadoodu waqti qaadaneyso. Dadka intiisa badan xal u helidda dhibaatooyinka waxay caadiyan ku hormareeysaa hadba sida suurtagalka ah ee looha hadlo afarta marxaladood ee dhibaatooyinka oo kala ah: shook, ficilcelin, falanqeyn iyo marxaladda dib’ujiheenta. Si katooy ahaataba dadka waxaa ”ku dhegga” mid ka mid ah marxaladaha dhibaatada, taasoo awoodda iyo farxadda noloshaba aysan soo laabaneyn muddo dheer.
U jirashada kansarka waxaa la xiriira arrimo badan, kuwaasoo keeni kara dhibaato culus. Jiradu waxay inta badan ku sameeysaa isbeddel jirka iyo mid shaqsi ahaaneed. Aqbalidda isbeddelkaas nafsad ahaaneed muddo ayuu qaadan karaa. Xarunta dhexe ee ururka Kansarka Syöpäjärjestöjen keskusliitto boggooda internetka waxa jira qeyb ay kuwada sheekeystaan dadkii u jiranaan jiray iyo kuwa hadda u jiran kansarka. Qeybtaas wadasheekeysiga ah waxaa laga yaabaa inaad ka hesho ra’i ka duwan kaad ka qabto xaaladdaada. Cabsida kaliya ee kansarka oo sida caadiga ah looga baqo waa soo laabashadiisa iyo balamaha koontoroolkiisa.
Kaisa waalidkeed waa ay geeriyoodeen muddo gaaban gudaheed. Inkastoo waalidkeed ay waayeel ahaayeen oo ay aad u jiranaayeen, tiiraanyada geeridooda waa mid dabiici ah, oo xaq ah, oo lamahuraan ah. Geerida waalidkeeda Kaisa isbeddel weyn ayay ku dhacay nolosheeda.Ma aha qof sidii carruur oo kale, ee waa weyn. Waayidda waalidkeed waa mid runtii ay u tahay qof weyn waqtigeedana qaadaneysa. Dhanka u jirashada kansarka Kaisa waxa laga yaabaa iney u keento iney fahamto xadidnaan dhanka nolosha si darran. Waalidka Kaisa waxay u ahyd qof muhiim u ah marka laga reebo hooyanimada iyo aabanimada, tusaale ahaan waxay ahaayeen saaxiibo isjecel oo ay la qeybsan jirtay waxayaabo badan oo muhiim ah.
Waa arrin caadi ah, in markii qof reerka ka mid ah geeriyoodo ay dhashaan fikrado ah arrimo aan xal loo heleyn ama ereyo, kuwaasoo lagu dhawaaqi karin. Waa wax marwalba inta badan dhaca, ama ha ahaato geeri lagu tashada ama mid lamafilaan ah. Sida ay doontaba ha ahaatee noloshu waxay galeysaa marwalba hakad, oo marka dambana noqota arrin la aqbalo.
Kaisa waxaa lagayaabaa iney u dhibaatooto muddo dheer marxaladda murugada. Waxaa kaloo suurtogal noqon kara, inuu ku dhaco xanuunka niyadjabka, kaasoo calaamadihiisu ka mid yihiin dareen rajo la’aan iyo aragti la’aan. Murugada, qaadataa muddo dheer waxay keeni kartaa niyadjab. Haddii Kaisa aysan dooneyn inay la xaajooto shaqaalaha arrimaha dhibaatooyinka, way raadsan kartaa wixii kale ee caawinaad ee ay nafsadeeda ku qanacsan tahay, tusaale ahaan waxay raadsan kartaa takhtar, taasoo lagu ogaan karo niyadjabka.
Inta badan murugada dheeraata way baaba’daa markii ay muddo qaadato, laakiin way wanaagsan tahay muddadaas ka kabsashada in laga faa'iideysto shaqaalaha arrimaha dhibaatooyinka ama wixii kaloo suurtogal ah. Markii murugadu baaba’do, waxaa dib loo arkaa iftiinka nolosha. Ka fikiridda qofka dhintay ama ka fakaridda wixii la soo dhhafay ma keenayaan wax kurbo ah, ee waxay xusuustaas hore noqoneysa mid si deggan iyo si niyad fiican ah. Xusuusuhu waxay isu roggaan kuwo xasiloon, oo beddelkeeda keena murugo sal la’aan ah.